သတင်း - UV nail gel polish လက်ကား
လက်သည်း ဂျယ်ဆေး ထုတ်ကုန်များကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် ရေပန်းစားလျက်ရှိပြီး ၎င်းသည် အလွန်ကြီးမားသော အလားအလာရှိသော စျေးကွက်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် လက်ရှိတွင် ဤလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ ပိုများလာပါသည်။Newcolorbeauty သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။လက်သည်း UV gel polish အတွက်ထုတ်လုပ်သူ2010 ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်ကုန်၊လက်သည်းလိမ်းဆေးများ ပေးဝေသည်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များ။အလှအပကို ပိုရလာဖို့ လူတော်တော်များများကို ကူညီပေးကြပေမယ့် ကောင်းကောင်းမသိသေးတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါပြီ။Gel လက်သည်းဆိုးဆေးသင့်အတွက် အောက်မှာ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
လက်သည်းဆိုးဆေးရဲ့ သက်ရောက်မှုအရ၊လက်သည်းဆေးဂျယ်သုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။base coat ဂျယ်, လက်သည်းဂျယ်အရောင်နှင့်top coat gel polish ပါ။ .
3. Primer (အောက်ခံအင်္ကျီဂျယ် )
4. dual light source မီးချောင်းများဖြင့် စက္ကန့် 30 ကြာ ဖုတ်ပါ။
6. dual light source lamp တွင် စက္ကန့် 30 ကြာ ဖုတ်ပါ။
8. dual light source lamp တွင် စက္ကန့် 30 ကြာ ဖုတ်ပါ။
10. dual light source မီးခွက်တွင် တစ်မိနစ်ခန့် ဖုတ်ပါ။
အခြေခံအစေး၊ photoinitiator၊ နှင့် အမျိုးမျိုးသော additives (ဥပမာ ဆိုးဆေးများနှင့် ဆိုးဆေးများ၊ rheology ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ၊ adhesion promoters၊ tougheners၊ monomer diluents၊ crosslinkers၊ solvents) စသည်တို့။
ဥပမာအားဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊လက်သည်း UV အနုပညာဂျယ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ လက်သည်းဆိုးဆေး၏ အရည်အသွေးနှင့် များစွာသက်ဆိုင်ပါသည်။ထို့အပြင် လက်သည်းပေါ်တွင် ကြာကြာထိန်းထားနိုင်မှုသည် တရားစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။မှန်ကန်သော အသုံးချမှုလက်သည်းပန်းချီကော်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
မေးခွန်း-လက်သည်းဆိုးဆေးရဲ့ တိုးတက်မှုက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေးကို အစားထိုးတာဆိုတော့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။လက်သည်း UV gel ဆိုးဆေး?
1. Solvent မပါသော၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော၊ အရသာမရှိသောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ခြင်း။
2. ခိုင်ခံ့သော ကပ်ငြိမှု၊ တောင့်တင်းမှု၊ ကျုံ့မှုမရှိ၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိ၊ ရိုးရိုးလက်သည်းဆိုးဆေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊လက်သည်းဆိုးဆေး UV ဂျယ်ကြာရှည်ခံနိုင်သည်။
3. ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်, လက်သည်းဆိုးဆေးခရမ်းလွန်ဂျယ် ပေါလစ်အတော်လေး ပျော့ပြောင်းနိုင်ပြီး၊ ပြုလုပ်ထားသော လက်သည်းပုံစံများသည် ကွဲပြားပြီး အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကော်သည် မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အပူချိန်နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ပြီးသွားသော လက်သည်းပုံစံသည် မတူညီသော သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အရောင်ပြောင်းပါမည်။လက်သည်းဆိုးဆေးနဲ့လည်း ယှဉ်လို့မရပါဘူး။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။babi gel လက်သည်းဆိုးဆေးများ ထောက်ပံ့ပေးသည်။သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ထုတ်ကုန်များ